Izinwele Zokwemvelo: Chaza izikhonkwane, kanjani ukwenza izinwele ze-kinky Curly 2020
1 yenza izinwele zemvelo zihlotshwe
1.1 Izindlela ezihlukile:
2 indlela yokuchaza ama-curls
2.1 Isinyathelo 4, vala ama-curls endaweni: Yenza izinwele zemvelo zenzeke:
2.2 Isinyathelo 5 welula izinwele zakho:
yenza izinwele zemvelo zihlotshwe
isithombe sesikweletu: @naturallydidi
Sonke sifuna ukuba sithandane ngokuphelele nesikhumba sethu semvelo. Noma kunjalo, kungaba inselele futhi kuphazamiseke ngempela uma ufuna ama-curls akho emvelo ukuba aphume, futhi konke ongakuphatha ukubuka kwekotini nge-curl lapha noma lapho. Ngiyifake izinwele ze-4a 4b, futhi ngithanda ukuthi i-pop yami yama-curly imanzi ngemva kokugeza nokujula, kodwa uma izinwele zami zimile, ziyashintsha kakhulu. Ngangivame ukuhawukela labo abakhululekile bezinwele zangokwemvelo kuze kube yilapho ngifunda indlela yokunakekela nokuphatha izinwele zami ngendlela efanele. Into ukuyivula ukufakeka kwemvelo kube izinwele ezinde ze-kinky curly kufanelekile ukuhambisa amanzi bese uvala lezi zindlovu endaweni lapho beyakha. Lokhu okuthunyelwe ikakhulukazi kubodadewethu abanoboya bezinhlamvu ze-4 njengo-4a 4b no-4c futhi bafuna izinwele zabo zibukeke njenge-curlier futhi zichazwe kabanzi.
ISIQEPHU 1: Yazi ukuthungwa kwakho futhi ube nethemba langempela lokuthi izinwele zakho zingabonakala kanjani. Uma unezinwele zemvelo ze-4c, awukwazi ukulindela ukufaka izinwele zakho zibe ngukuthungathwa kwe-3b. Lokho ukulindela okungenangqondo. Izinwele zakho zibukeka sengathi zibukeka kanjani uma zibukeka kahle futhi zigcwele amanzi. Ngokujwayelekile, izinwele zethu zingabheka amazinga we-1-2 uma kukhululekile ngokwanele. Iqhinga lokubamba lezo zindwangu lapho izinwele zakho zikhona kuleso simo bese uzikhiya endaweni.
ISINYATHELO 2: wazi izinwele zakho ze-porosity level: To ukuguqula izinwele ze-kinky zibe izinwele ezikhazimulayo, kufanele uqonde ukuthi ungazenze kanjani izinwele zakho ngendlela efanele. Lokhu
isithombe sesikweletu: @olive_chels
Kudinga ukuthi wazi izinwele zakho ze-porosity level nokuthi yimiphi imikhiqizo ezosebenza kahle kuwe ukuthi yimiphi imikhiqizo ezokoma izinwele zakho. Uma une-porosity ephansi, lokho kusho ukuthi kunzima ukuphucula izinwele zakho; Nokho, uma wenza umswakama, uhlala isikhathi eside. Izinwele ze-porosity eziphakeme zigcwala ngokushesha futhi zithatha umswakama lula; Kodwa-ke, ilahlekelwa umswakama kalula. I-porosity ibhekisela enombolweni yamaphorethi ezinhlathini zakho zezinwele. Nginezinye izihloko ezihamba ngokujulile mayelana i-porosity lapha.
Uma konke okunye kuhluleka, ungayisebenzisa izandiso ze-kinky curly weave njenge izinwele ze-crochet curly lapha,
I-3c-ins, futhi ama-wigs lokho kusakunika lokho ukubukeka kwemvelo ngaphandle kokubonakala sengathi ugqoke izandiso. Izandiso Zezinwele Zami Zemvelo zinikeza imikhiqizo ekhethekile ye-kinky curly for zonke sista zemvelo! Esikhundleni salokho, unezinwele ezikhazimulayo, izinwele ze-kinky curly, afro kinky, i-afro curly, i-4a 4b noma i-4c, izinwele ezinama-kinkiest, sikufake.
indlela yokuchaza ama-curls
Isinyathelo se-moisturize ye-3: amanzi yiyona isithako esingcono kakhulu sokuthola izinwele ezivela kinky yayo. Amanzi i-hydrator enkulu futhi izokwenza ama-curls akho avele. Into emayelana namanzi iyomile masinyane, futhi ama-curls ethu abuyele ezinkanyeni! Lapho izinwele zigcwele amanzi, futhi zingekho esimweni saso se-kinky, lesi yisikhathi esihle kakhulu sokwengeza ama-crl creams namafutha asebenza kahle emoyeni wakho. I-Glycerin iyinama-asekelwe ngamanzi angena kulowo shaft wezinwele. Ayishintshi ngokushesha njengamanzi futhi ushiya ama-sheen amahle ezinwele. Ngincoma kakhulu ukusebenzisa le mkhiqizo ngemuva kokususa isimo sakho se-conditioner. Bese sebenzisa ama-crl creams akho namanye ama-moisturizers ozikhethelayo.
i-curls izinwele zemvelo
Isinyathelo 4, vala ama-curls endaweni: Yenza izinwele zemvelo zenzeke:
Ngalesi sikhathi, izinwele zakho kufanele zibe zimanzi futhi zingene kancane. Manje yisikhathi saso sokuvala lezo curls endaweni. Iqhinga lokuthola izinwele zakho ze-kinky zibukeka ziwu-stop curly and dehydration. Manje ukuthi izinwele zakho zisesimweni sayo esibukhali, ufuna ukusebenzisa i-gel yokuzikhethela. I-gel oyintandokazi i-eco styler. Qinisekisa ukuthi imikhiqizo oyifake ezinyaweni zakho ngaphambi kokuxuba izoxubana kahle ne-gel futhi ungashiyi okusele okumhlophe noma okumhlophe. Thatha i-gel bese uyifaka ezinyaweni zakho ngaphandle kokuphazamisa ama-curls owadalile. Manje ngobumnene cima amanzi angaphezu kwe-t-shirt endala. Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, hlala ngaphansi komshini omisiwe ukuze i-gel ikwazi ukuma ngokushesha futhi ivimbele ukunciphisa okuningi ngangokunokwenzeka!
Isinyathelo 5 welula izinwele zakho:
Manje ukuthi izinwele zakho zomile, kufanele zibukeke zikhazimulayo futhi zibukeka kahle. Ukuze uthole ubude obuncane nevolumu, ngincoma ukuthatha isomisi esicayo futhi ulula izinwele ezimpandeni ukuze uqede ukuqina kwegelisi futhi uvumele umoya wakho ukuba ube nomzimba ngaphandle kokuphazamisa izikhwama ozidalile. Uma uvula izinwele zakho ze-kinky ukuze ziboshwe izinwele usebenzisa lolu umswakama kanye nenqubo yokukhiya, izinwele zakho zizoqina kancane kwi-gel; Nokho, kuzokhipha usuku olulandelayo 2. Ungenza futhi i-gel eline-flaxse yomkhiqizo ophilayo.
isithombe sesikweletu: @beatbynesh
isinyathelo sezinhlamvu ze-curl zokuhlukumeza ze-6: Uma ungafuni noma uthanda ukusebenzisa i-gel yakho ungakwenza njalo ukuphuma, ukuphuma ngaphandle, noma ezinye izitayela ezisebenzisayo ukuboya izinwele zakho zemvelo.
Imikhiqizo kanye ne-Cons of Mini Twist
Ubulungisa Bokungafanele: u-Cyntoia Brown